UDRAKE: NDIYABULELA KAMVA KWI-ALBHAMU - IINDABA
Uphefumlelwe yi-rap kunye ne-R & B ngokulinganayo, uDrake uba ngowokuqala kwi-post-Kanye, abavakalisi be-emo-y ukuhambisa ngokupheleleyo kwi-LP yakhe yokuqala.
UDrake ucula okanye aqabule igama elithi 'Ndi' amaxesha angama-410 kwi-albhamu yakhe yokuqala. Ngaphandle kwendawo ye-hip-hop-isitayela esidume ngokusombulula i-solipsism-lo ngumdlalo. Ukuthelekisa, umlindi wezibuko owaziwayo u-Kanye West ukwazile ukusebenza kuphela ngo-220 'Ndikwiivesi kunye neehuku zekhefu lakhe elikhulu, Ukuyeka isikolo eKholejini . Ebonisa ; 210. Ukuthandabuza Okufanelekileyo ; 240. Nge Ndiyabulela kamva , UDrake uzama ukungena kwi-pantheon ye-rap-busters ngamandla apheleleyo omntu wokuqala isimelabizo. Onke amehlo ajonge kuye - ngakumbi awakhe. Kodwa xa sijonga olu hlanga luxubeneyo, isiqingatha-samaJuda, onke amaCanada 'amaDegrassi: Isizukulwana Esilandelayo' sijongeka kwaye sivakala ngokungafaniyo nayiphi na inkwenkwezi enkulu yaphambi kwakhe, ukubheja indlu ngaphandle kwento ayenzayo ngaphandle kokuba ingcakazo enobulumko.
UDrake ngoyena mntu ufumana iziselo kunye naye othetha ngaye iiyure ezimbalwa- ukuba unethamsanqa, unokukucela ingcebiso ngento enye okanye ezimbini. Kodwa oku kulungile kuba amabali kaDrake angcono kunawakho. Njengaleyo yokuba uLil Wayne wenza ubuhlobo kwaye wamsayina ekuphakameni kwamandla ka-Weezy. Okanye ufumene njani noRihanna kunyaka ophelileyo. Okanye ngelo xesha ukhanyisile evela eToronto uye waya kumqhubi wenqwelomoya ohamba phezulu kumandla emixube ekhutshwe nguwe. Ewe kunjalo, kukho iklasikhi malunga nokusela iiglasi ezininzi zeAce yeSpades kwaye ubuze uNicki Minaj ukuba atshate naye. Kuvakala ngathi bubukho obumnandi.
Kodwa kukho ingxaki. Nangona esisityebi kwaye eyinzwana eneminyaka engama-23 ubudala esasaza umculo wakhe kwihlabathi liphela ngefashoni yeenkwenkwezi ezintlanu, uDrake ufuna ngokwenene ukuba abe sembhedini ongezantsi, enxibelelana nentombazana ecaleni kwebhasikiti yokuhlamba impahla kwiYunivesithi eNgcwele, njengoko Ukuqhekeza, 'Ndinqwenela ukuba ndingadumanga / ndinqwenela ukuba bendisesesikolweni / Ke ukuze ndibenakho kwigumbi lam lokulala / ndiza kukubeka kuwe.' Kwenye indawo, i-irony ayilahlekanga kuye, kodwa akabuyisi nto: 'Ndiyazi ukuba i-niggas izakubulala ngale ndlela yokuphila / ndijonge phambili' kwiinkumbulo zangoku. '
Ngokulula, uDrake uthandana nokungabinalo uthando. Kodwa endaweni yokugxeka ngokuchasene nabafazi bakhe abaya kuba l I-808s kunye nentliziyo ebuhlungu okanye ukuwela kwi-misogyny yethokheni, ubudlelwane bakhe nabasetyhini bunzima ngakumbi. Ngelixa incwadi yomthetho ye-hip-hop ye-LP engafunekiyo ngaphambili ibinyanzelisa iingoma 'zamanenekazi' ebusuku ezazisoloko zixhaphaza, zithuka, okanye zombini, uDrake uphila ngokuthamba. I-'Karaoke 'eqaqambileyo nesindayo iyifumana icula malunga nentombazana engakwaziyo ukujongana neendlela zayo ezintsha zokubeka i-jet. 'Ndizama nje ukuya phambili / Kodwa ukubonwa kukukwenza ube novalo, utshilo, kuvakala ngathi uzibophelele ngakumbi kunombilini we-melisma-drunk heartthrobs. Indlela yakhe eqhubela phambili nenesidima iyosulela, nayo; kungekudala uza kutshayisa 'uFancy', uTI imingxunya 'yokumba okwegolide kakhulu' wayekhe wancoma iingoma ezinje 'Nantoni oyithandayo', endaweni yoko wakhetha inenekazi elinye elineBMW kunye neJaguar kwigaraji. Njengokuba oko kwakungonelanga, uMary J. Blige ngokomoya uyayityikitya imvakalelo ngokongeza izinto ezithile ezifihlakeleyo njengoko ingoma isondela esiphelweni.
Ngeli xesha, iqabane likaDrake eliselula eliMali uNicki Minaj longeze ukungangqinelani ngokwesini, ukubamba umphathi wakhe kwi-diabolical 'Up All Night', kwaye eyona nto ibalulekileyo kwi-albhamu yakhe kukuba asebenze ne-The-Dream ye-uber-slow jam 'Shut It Phantsi '. Ingoma iphela ngoDrake ngokungenazintloni ezama ukungena kwiibhulukhwe ezintsha zomntu omaziyo- 'thatha ezo zithende ze-fuckin, kufanelekile, ntombazana,' ucebisa. Akayingelosi. Kodwa naxa le Romeo iqala ukuphosa amatyala edola kwiklabhu yomcu 'ku-Miss Me', i-ogling yakhe ngandlel 'ithile iyodwa kwaye inqanaba:' Andimgwebi kodwa andinakuze ndimthande / 'Isizathu kuye ndinguye nje rapper kwaye kungekudala uzakudibana nomnye. '
Njengokuba i-rap yakhiwe ngobugcisa bokujonga inkaba, ikwasekwa kumzabalazo. Kwaye njengokuba ukuzingca kukaDrake kutyhileke ngokungafaniyo kwi-hip-hop, zinjalo neembandezelo zakhe. Ukhulele kwihlomela-dolophu yaseToronto kwaye wababalwa ngayo yonke into ngaphandle kwesibini esisebenzayo sabazali, abesahlukana xa wayeneminyaka emithathu. Njengo Kanye Kanye phambi kwakhe, u-Drake uyaxakeka ngelixa esamkela ukungahambisani nokuthengisa iziyobisi, engenabundlobongela, nembali engeyongozi- edibanisa nabalandeli abaninzi be rap ngendlela efanelekileyo. Kwaye, ngequbuliso, yonke le nto 'ndiyiyo' iba yinto eninzi kuthi. '
Imibuzo enemixholo yeKlasi yesi-4 ye-SD Umxholo wesi-3 Umxholwana woku-1 weZilwanyana kunye neZityalo kwindawo yam yeKhaya-Www.Bimbelbrilian.Com
Ngowuphi umlinganiswa onguSofia wokuqala? Imibuzo
Imibuzo yePharmacognosy kunye neempendulo
Ithuba lokuba amaRapper abelane ngeengoma ezi-4 ezintsha: Mamela
Ukusweleka ngaphezulu kwe-1979
Iingoma zika-dj khaled kunye nedrake
I-albhamu eyi-ariana grande sweetener
ibhanti enkulu epinki
amasetyana eelamuni aya esikolweni
iingoma ze-brockhampton saturation ii